များများဆွဲလေ များများကျန်းမာလေ | သိလိုရာမေး
ထွေလာဆန်းပြား လိင်ဆောင်းပါး, နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလေ့လာမယ် များများဆွဲလေ များများကျန်းမာလေ
အရင်တစ်ခေါက်တုန်းက သိလိုရာမေးကနေ ခုတင်ထက်မှာ စကေးကြမ်းတဲ့ ချိဖဖြစ်ဖို့ နည်းလမ်းလေးတွေကို ဝေမျှပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ ခုတစ်ခေါက်မှာ ခုတင်ပေါ်မှာ ချစ်ချစ်နဲ့တူတူ များများဆွဲမယ်ဆိုရင် ဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေ ရနိုင်လဲဆိုတာကို ပြောပြပေးသွားပါ့မယ်။
ခုတင်ထက်မှာ စကေးကြမ်းတဲ့ချိဖဖြစ်ဖို့ကိုတော့ ဒီ Link ကို နှိပ်ပြီးဖတ်နိုင်ပါတယ်။
စကေးကြမ်းတဲ့ချိဖ ဖြစ်ပြီးသွားသူတွေအတွက် ချစ်ချစ်နဲ့ များများဂျိန်းသင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေကတော့…
(၁) ဆီးကျိတ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားနှုန်းကို လျော့ကျစေတယ်…
စစ်တမ်းတွေအရ တစ်လမှာ ၁၂ ကြိမ်နဲ့အထက် ဂျိန်းကြတဲ့ချိဖတွေက ၄ ကြိမ်ကနေ ၇ကြိမ်ကြား ဂျိန်းတတ်တဲ့ချိဖတွေထက် ဆီးကျိတ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားနှုန်းက ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းလျော့ကျတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျန်းမာချင်သူချိဖများအနေနဲ့ ဖဲမွေ့ယာထက်မှာ များများဂျိန်းရုံနဲ့ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကို မဖြစ်ခင်က ကြိုတင်ကာကွယ်ရာရောက်မယ်ဆိုတော့ ဘာများလိုသေးလဲ?
(၂) မြွေဆိုးလေးရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြင့်တက်စေတယ်…
American Journal of Medicine ကနေ ပြုလုပ်တဲ့ စစ်တမ်းတစ်ခုမှာဆိုရင် ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံမှု အကြိမ်ရေများတဲ့ ယောကျာ်းတွေက လိင်ဆက်ဆံမှုနည်းတဲ့ အမျိုးသားတွေထက် Erectile Dysfunction လို့ခေါ်တဲ့ ပန်းသေပန်းညိှုးဖြစ်နိုင်စွမ်းလဲ နည်းပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ခဏလေးနဲ့ ကိစ္စပြီးသွားတတ်တဲ့ တူတော်မောင်တွေ ရှိရင်တော့ ဒီလို ခဏခဏ ဂျိန်းတဲ့နည်းလမ်းကို စမ်းကြည့်သင့်ပါတယ်။
(၃) နှလုံးရောဂါကို ကာကွယ်ပေးတယ်…
အိမ်ထောင်သည်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အတူနေချစ်သူရှိတဲ့ ဘော်ဒါတွေပဲဖြစ်ဖြစ် ဒချိ ဒချိ ပုံမှန်လုပ်တယ်ဆိုတာ လေ့ကျင့်ခန်းတစ်မျိုးပါပဲ။ ဒီတော့ လူ့ခန္ဓာကိုယ်က ပုံမှန်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား အားကစားလုပ်ရင် အဝလွန်ရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ၊ သွေးတိုး နဲ့ ဆီးချို ရောဂါတွေကို ကာကွယ်နိုင်သလိုမျိုးပဲ ပုံမှန်ဒချိတာဟာလဲ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါတွေ၊ ရုတ်တရက် နှလုံးခုန်ရပ်တာကို ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ တစ်ခုရှိတာက နှလုံးရောဂါအခံရှိပြီးသား အမျိုးသားတွေဆိုရင်တော့ အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါကိုလိုက်ပြီး လိင်ဆက်ဆံမှုကိုပြုလုပ်သင့်ပါတယ်…
(၄) နှစ်ကိုယ်ကြား ဆက်ဆံရေးကို တိုးစေတယ်…
ချစ်သူနဲ့ တကျက်ကျက်ရန်ဖြစ်နေရလား? ကြာပါတယ်… သူမကို အနမ်းကြမ်းကြမ်းသာပေးပြီး လက်စွမ်းပြလိုက်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်… မကြာခဏ ချစ်ရည်လူးလေ့ရှိတဲ့ ချိဖတွေအနေနဲ့ ကိုယ်ချစ်ရသူနဲ့ ချစ်မှုရေးရာမှာသာမက လိင်မှုကိစ္စမှာပါ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဆိုတိုင်ပင်နိုင်တဲ့အချိန်ပိုများပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် တခြားချစ်သူစုံတွဲတွေထက် သံယောဇဉ်လဲ တိုးနိုင်သလို တစ်ဦးအပေါ် တစ်ဦး ယုံကြည်ကိုးစားမှုလဲ တိုးစေပါတယ်။